Izenzo ezithatha inyanga ezintandathu zihlala ziqhuba. Iimidlalo ezizithandayo kunye nokuzonwabisa.
Ukuphuhliswa kwabantwana kwiinyanga ezintandathu.
Kwiinyanga ezintandathu ubudala ubudala, umntwana sele sele engumntu ozimeleyo onomdla kwizinto ezenzeka kuye. Abazali kunye naye baya kudlula kwinqanaba elincinci lokuphuhliswa, xa inkwenkwe ibukele kwaye ifunde ihlabathi kuphela kwisibhedlele okanye kwisihambeli. Kule minyaka, abantwana sele beqala ukukhwela kunye nokufunda ngokucophelela zonke izifundo ekuthinteni nasekunambeni.
Yintoni abantwana abakule minyaka?
Singazixela ukuba zinyanga ezintandathu kuba umntwana luhlobo lwenjabulo, emva kokuba yonke i-carapace iwele umgca phakathi komntwana osana okanye umntwana omdala. Abantwana sele beyazi indlela:
Ngokuqinisekileyo gcina intloko yakho kwaye uhlale kunye nenkxaso. Abanye bade bemi emilenzeni yabo baze bazame ukuthatha amanyathelo ambalwa ngoncedo lonina.
Ukulala emhlane wakhe udlala nemilenze yakhe neminwe, kodwa ukuba into enomdla ibonakala kufuphi, umntwana usenokukhawuleza aphendule emathunjini aze asondele
Unokuzama ukuma ngokwakho, ukubambelela emva kwesikhalazo. Kwaye nangona oko kungenzeki ngokukhawuleza, umntwana ujikezela intloko yakhe ngeendlela ezahlukeneyo, ukuphendula kwisandi okanye into entsha. Kwakhona abantwana baxhomekeke phambili ukufumana ithoyilo
I-Kid iyahlula ngokucacileyo izalamane kwaye iyakwazi ukusabela kwigama labo
Ukuzama ukunambitha ukutya kwisitya samama. Kukho okukhethwa kukho kokuqala, kwaye awuyi kukwazi ukunondla umntwana ngento acinga ukuba ayilunganga
Ixesha elide lingadlala ngetekisi elilodwa, ucinga, utyhoboza okanye uzama ukuliphula
Ukuba into isuswe kwintsimi yombono wengane, kuya kufuneka iphendukele ukuyifumana ngokujonga
Ubunonophelo, ukondla kunye neerhasi
Njengangaphambili, kuya kufuneka uhlambe umntwana rhoqo imihla, uhlambe kwaye usule emva kokutshintsha i-diaper. Zama ukumnika ithuba elininzi njengoko unako ngaphandle kweempapu.
Ibakala elibalulekileyo kwi-regime yosuku lweentsuku ezithandathu lwenyanga luyondla. Kancinci makaye azame ukutya kwabantu abadala, kuphela kwiincinci ezincinci kwaye ngokuthe ngcembe. Mnike ithuba lokutya iphariji ngqo ngezandla zakhe kwisitya. Emva koko umntwana unokufundiswa ukusebenzisa i-spoon.
Zama ukunika umntwana ukutya okutsha ngeveki ngaphambi kokugonywa okucwangcisiweyo. Oku kunokubangela ukuphenduleka okungalindelekanga.
Urhulumente wolu suku alukho phantsi kweenguqu ezizodwa. Isondlo iyadingeka yonke into efanayo, kwaye umntwana kufuneka alale emini. Kodwa ukanti umsebenzi usanda. Ngokomzekelo, ukuhamba inkwenkwe ayikwazi ukulala nonke, ukukhetha ukujonga ngapha nangomdla.
Ungazami ukuhlakulela umntwana ngamandla. Ukuba akafuni ukuhlala okanye ukuma, ungazami ukumnyanzela. Umntwana ngamnye ngumntu, kwaye okwenu unokungakulungeli okwamanje. Unokumncinciza ngokunyanisekileyo kuye, ukusasaza kwiphephe lezinto zokuzonwabisa, ukwenzela ukuba umntwana akwazi ukuzikhangela.
Njengaphambili, abantwana bafunda ihlabathi kungekhona nje ngamehlo abo, kodwa ngeminwe yabo. Ngoko ke, makathinte yonke into engabonakali yingozi: ikhephu, umthi, amaqabunga. Ingqwalasela enkulu ithandwa kwiiyayi zokudlala. Nika ingqwalasela ekhethekileyo kulabo onokukwazi ukuyenza ixesha elide. Inomdla omkhulu yindlu eneengcango kunye nezandi, okanye kwanamathoyizi alula ngokulula, izibane okanye iingcango.
Ukuphuhlisa izakhono zomoto zomntwana, ukudlala naye kwimidlalo elula, njenge "ladushki." Musa ukucaphukisa xa umntwana ephula iphepha okanye ingubo. Ngale ndlela uyazi iipropati zezinto.
Iintsana zokuqala: ukondla nokunyamekela
Indlela yokugcina ubuthongo kwiintsana
Ukunyuka kwezilwanyana kumntwana ongaphantsi komnyaka omnye wokuncelisa
Izinto ezintlanu ongazi malunga nokulala usana
Ukunyamekela umntwana ekhaya emva kwesibhedlele
Umbala ophuzi - umthamo wekwindla-2016
Ukunyangwa kotywala kunye ne-homeopathy
Umhla wokuzalwa kaDmitry Shepelev
Yintoni eyasithintela ekufundeni iilwimi zangaphandle?
IiJust Autumnal e-Giorgio Armani Runway 2016 I-Makeup Capsule Collection
Inkolelo malunga namadoda nabasetyhini: inyaniso okanye inyaniso?
Ukuba indoda iyabetha umfazi wayo
Umntwana webele wayegula ngenxa yesifo esiyingozi
Ukucocwa kwengqondo kunye nokucocwa kwamazinyo
Indoda epheleleyo kumfazi omhle
Basetyhini, siqala ukuthukuthela ngokuchanekileyo!